Iphrofayela ye IAS
Njengoba embukisweni wezohwebo mayelana ezishintshayo ezimbonini ngaphansi CIIF, IAS umcimbi amazwe Industrial Automation Solutions, amaHlathi kanye Process Automation, kagesi Systems, Industrial IT & Isofthiwe Microsystems Technology. Impumelelo amaseshini odlule kuqinisekisa umbukiso njengoba omunye ezikhanga kakhulu nemibuthano yezohwebo ezishintshayo ensimini e-Asia, futhi kukwenze kube njengendlela yesikhulumi engcono ochwepheshe kanye ongoti emkhakheni ukuze uthole ndawonye.
Le ndawo embukisweni IAS 2017 ifinyelela 56,000㎡, 618 umbukiso bavela emazweni 18 kanye nezifunda, ezifana China, eJalimane, eJapane, eKorea, e-USA, i-Italy, Switzerland, France, e-Austria, eBrithani, Israyeli, Canada nokunye. Phakathi embukisweni, 65 izinkundla nezingqungquthela yayiqhutshelwa kanye nezifundiswa phezu 178.000 wavakashela.
Nofuel Amandla kuyinto sokuya IAS, kwamandla ethu panel, ezishintshayo imishini isixazululo, motor control izingxenye kuyinto okudume kakhulu idokodo.
isikhathi Iposi: Septhemba-12-2018